UMongameli we-IBM uthi ii-Chips ezinqongopheleyo zinokuhlala iminyaka emibini ngaphezulu | Ndisuka mac
I-heatsink entsha kunye ne-wiring yangaphakathi
Njengoko umongameli we-IBM uJim Whitehurst echaze kwi-BBC, ukunqongophala kwee-Chips kungadlula eminye iminyaka emibini. Inkampani ethandwayo yetekhnoloji eyayikhuphisana neApple ngaphambili kwinkqubela phambili kunye nokuthengiswa kweekhompyuter zobuqu icacisa ukuba uqikelelo lwayo lilahleko engaphezulu kwe $ 110.000 yezigidigidi kulo nyaka kwicandelo leemoto ngenxa yokunqongophala kwezinto.
Kodwa kukuba ishishini lobuchwephesha alinangxaki kwaye kufanelekile ukuba kuthiwe chip kunye nemicrosoftchip yokuvelisa iingxaki eziya ngaphakathi kuzo zonke izixhobo ze-elektroniki esizisebenzisa kule mihla yethu.
Ukusuka kolunye ulibaziseko ekuhanjisweni kwenqanawa kunqongophala kwimigca yemveliso
Ekugqibeleni, into eqondwa ngumthengi kukuba ukuthunyelwa kuthatha ixesha elide kakhulu kunokuba bekulindelwe kwaye imigca yemveliso ayinakho ukufumana izinto zokudibanisa izixhobo kwaye oku kuyenzeka ukulibaziseka ixesha elide ngexesha lokuthunyelwa.
Siyibona kwizikhombisi, iimoto, iikhompyuter, ii-smartphones, izixhobo zombane kunye nazo zonke iintlobo zezixhobo ze-elektroniki. Kucacile ukuba le yingxaki kubo bobabini abavelisi kunye nabasebenzisi ngokwabo, ababona umnqweno wabo wokuthenga iimveliso ezikhathazekile kukusilela.
Ukuba ngoku sihamba silindele ukulibaziseka okwexesha elide kwaye abanye sele becinga ukuba kuya kuhlala iminyaka eliqela njengoko kunjalo kumongameli we-IBM, Iya isiba nzima ngakumbi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » UMongameli we-IBM uthi ii-Chips ezinqongopheleyo zinokuhlala iminyaka emibini ngakumbi